Sina tokana laharana mitanjozotra bearings bearings Manamboatra sy Factory | CMC
tsipika fitetezana tsipika tokana
Ny peratra sy ny roulant an'ny bearings CMC dia vita amin'ny vy-chrome avo voadio vy-GCr15. (Ny tsy fitovian'ny vy mitondra ny laharana tsirairay avy amin'ny firenena tsirairay. Jereo ny latabatra 1.) Ny tranom-borona dia voatsindrona totohondry avy amin'ny fantsom-bolo mangatsiaka be kalitao na tranom-boasary nylon. taolana vy.
Ny tena tanjon'ny fanosorana diloilo dia ny fisorohana ny fifandraisan'ny metaly eo anelanelan'ny singa mihodina, ny làlambe, ary ny tranom-borona, ary koa ny fisorohana ny fiterahana amin'ny harafesina sy ny fitafy. Ny fiasa fanampiny dia ny famehezana sy ny fampangatsiahana ny fiterahana. Ny fitaterana dia mety hosorana menaka na oi, amin'ny tranga manokana misy menaka manitra, ny safidiny dia miankina indrindra amin'ny maripanan'ny mari-pana, ny hafainganam-pandehan'ny asa ary ny fepetra fampidinana ireo bearings voakasik'izany.
Ny bearings roller tapered dia iharan'ny famatrarana radial sy axial mitambatra mifototra amin'ny làlan'ny radial. Ny fahaiza-mitondra dia miankina amin'ny zoro raceway amin'ny peratra ivelany, ny haben'ny lehibe kokoa
Ny lehibe kokoa ny fahaizan'ny entana. Ity karazana fitondra-tànana ity dia fizarana azo zahana, izay mizara ho laharana tokana, laharana roa ary tadin-dambam-bolo an-tsokosoko efatra arakaraka ny isan'ny andalana misy singa mihodina ao anaty fiterahana. Ny fahazoan-dàlana amin'ny bearings milomano tapered tokana dia mila manitsy ny mpampiasa mandritra ny fametrahana azy; ny fahazoan-dàlana misy rojom-baravarankely misy tsipika roa sy enina dia napetraka ao amin'ny orinasa arakaraka ny fitakian'ny mpampiasa, ary tsy mila fanitsiana ny mpampiasa.
Ny bearings roller dia nanakodia ny peratra anatiny sy ny zana-kazo ivelany, miaraka amin'ny roulated tapered eo anelanelan'ny roa. Ny tsipika famaritana ny haben'ny cone rehetra dia mivondrona amin'ny teboka iray ihany amin'ny axis mitondra. Ity famolavolana ity dia mahatonga ny bearer roller miaraka aminy mety indrindra amin'ny fitondrana enta-mavesatra (radial sy axial). Ny fahaizan'ny axial load dia mitaky ny zoro ifandraisan'ny α; ny lehibe kokoa ny zoro α, ny avo kokoa ny fahafaha-mitondra axial. Ny haben'ny zoro dia asehon'ny coefficient fanaovana kajy e; ny lehibe kokoa ny sandan'ny e, ny lehibe kokoa ny zoro fifandraisana, ary ny lehibe kokoa ny fampiharana ny mitondra hitondra ny axial entana.
Matetika no misaraka ny bearings roller, izany hoe ny fivorian'ny peratra anatiny misy ny peratra anatiny misy fantsom-pifandraisana sy tranom-borona dia azo apetraka misaraka amin'ny peratra ivelany (peratra ivelany).
Ny bearings roller tapered dia be mpampiasa amin'ny indostria toy ny fiara, ny fikosoham-bary, ny fitrandrahana, ny metallurgy ary ny milina plastika.
Teo aloha: Beared tombo-kase
Manaraka: tsipika fitetezana tsipika tokana
Inch Single Row
Metric Row Row
Mitondra Ball feno famenony, Roller Pin Bearings, Inch Single Row, Mitondra tena eo amin'ny fitondrana baolina, Taper Roller Bearing Arrangement, Heavy Rolling Bearings,